KEDU OTU ESI CHỌPỤTA ỌTỤTỤ CORES A PROCESSOR NWERE - WINDOWS - 2019
Kedu otu esi chọpụta ọtụtụ cores a processor nwere
Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ banyere ọnụọgụ nke CPU cores ma ọ bụ naanị nweta ọganihu, na ntụziaka a ị ga-achọpụta otu esi achọpụta ọtụtụ cores processor na kọmputa gị n'ọtụtụ ụzọ.
M ga-ebu ụzọ mara na onye ekwesịghị ịgbagwoju ọnụ ọgụgụ cores na eri ma ọ bụ ihe nhazi nke ezi uche dị na ya: ụfọdụ ndị na-emepụta ihe n'oge a nwere ihe abụọ (ụdị "cores dị ọcha") kwa isi anụ ahụ, n'ihi ya kwa, i nwere ike ile onye njikwa ọrụ lee otu eserese nke nwere 8 eri maka ihe nhazi 4, ihe yiri ya ga-abụ na njikwa ngwaọrụ na mpaghara "Nhazi". Hụkwa: Otu esi achọpụta oghere nke processor na motherboard.
Ụzọ iji chọpụta ọnụ ọgụgụ nke cores processor
Ị nwere ike ịhụ ọnụọgụ anụ ahụ na ọtụtụ ọnụọgụ kọmputa gị nke dị iche iche, ha niile dị mfe:
Echere m na nke a abụghị ndepụta zuru oke nke ohere, ma o yikarịrị ka ha ga-ezu. Ma ugbu a n'usoro.
Na nsụgharị ọhụrụ nke Windows, enwere ike ịmepụta maka ịlele ozi usoro isi. Enwere ike ịmalite site na ịpị igodo Win + R na keyboard ma dee msinfo32 (wee pịa Tinye).
Na "Processor" ngalaba, ị ga-ahụ ihe nlereanya nke gị processor, ọnụ ọgụgụ nke cores (anụ ahụ) na ezi processors (eri).
Chọpụta ọtụtụ cores CPU kọmputa nwere na iwu akara
Ọ bụghị onye ọ bụla maara, ma ị nwekwara ike ịhụ ozi gbasara ọnụ ọgụgụ cores na eri na-eji akara iwu: na-agba ya (ọ bụghị na nnọchite onye nchịkwa) ma tinye iwu ahụ
CPU WMIC Get DeviceID, NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors
N'ihi ya, ị ga-enweta ndepụta ndị nhazi na komputa (ọtụtụ mgbe), ọnụ ọgụgụ cores anụ (NumberOfCores) na ọnụ ọgụgụ nke eri (NumberOfLogicalProcessors).
Na Task Manager
Windows Task Manager 10 na-egosiputa ozi gbasara ọnụ ọgụgụ cores na usoro nhazi na kọmputa gị:
Malite ọrụ njikwa (ị nwere ike iji menu nke mepee site na ịpị aka bọtịnụ "Malite").
Pịa na taabụ "arụmọrụ".
Na akara akaebe na mpaghara "CPU" (nhazi processor) ị ga-ahụ ozi gbasara cores na usoro ihe nhazi nke CPU gị.
Na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke onye na-emepụta ihe
Ọ bụrụ na ị maara usoro nhazi gị, nke a pụrụ ịhụ na ozi ihe ọmụma ma ọ bụ site na ịmepe ihe dị nso na akara "Kọmputa" m na desktọọpụ, ị nwere ike ịchọpụta àgwà ya na ebe nrụọrụ weebụ nke onye ọrụ ahụ.
Ọ na-emekarị iji tinye ụdị nhazi ahụ n'ime search engine ọ bụla na ihe mbụ (ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ ahụ) ga-eduga na ebe nrụọrụ weebụ nke Intel ma ọ bụ AMD, ebe ị nwere ike ịnweta nkọwa nke CPU gị.
Nkọwapụta gụnyere ozi gbasara nọmba cores na usoro nhazi.
Ozi banyere usoro ihe omume na mmemme ndị ọzọ
Imirikiti mmemme nke atọ maka ilele àgwà njirimara nke ihe ngosi kọmputa, n'etiti ihe ndị ọzọ, ole cores onye nhazi nwere. Dịka ọmụmaatụ, na usoro CPU-Z n'efu, ụdị ozi ahụ dị na taabụ CPU (dị na Cores ubi, ọnụ ọgụgụ nke cores, na faịlụ, eri).
Na AIDA64, ngalaba CPU na-enyekwa ozi gbasara ọnụ ọgụgụ cores na ihe nhazi nke ezi uche.
Gbasara ihe omume dị otú ahụ na ebe ibudata ha na nyocha dị iche iche Otu esi achọpụta àgwà nke kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ.